I-China 1350KG, 1500KG Uhlobo lweMagnetic Formwork System abavelisi kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
Inkqubo ye-1350KG okanye ye-1500KG yohlobo lwefomathi yemagnethi eneqokobhe lekhabhoni yentsimbi ikwaluhlobo lomgangatho wamandla oqhelekileyo wokulungisa i-precast plateform, ekhuthazwa kakhulu ukuba isetyenziselwe ukulungisa i-sidemould kwiiphaneli zesandwich zekhonkrithi zangaphambi kokuba zenziwe. Inokulingana kakuhle kwifomu yentsimbi okanye ifomathi yamaplanga ngamaplanga.
1350KG okanye i-1500KG yeMagnetic formwork System Ikwaluhlobo lomgangatho wamandla asemgangathweni wokulungiswa kweplatfomu yekhonkrithi, ekhuthazwa kakhulu ukuba isetyenziselwe ukulungisa i-sidemould kwiiphaneli zesandwich zekhonkrithi. Inokulingana kakuhle kwifomu yentsimbi okanye ifomathi yamaplanga ngamaplanga, kunye neeadaptha ezahlukeneyo okanye iibholiti zokucinezela.
Emva kokucofa iqhosha, iimagnethi zebhokisi zibambe itafile ngokuqinileyo. Kulula ukukhonkxa isitya sensimbi kwipleyiti yomthi ngezikhonkwane ezinokuthi zenziwe ngokucinezela nje iqhosha ngesandla okanye ngonyawo. Ukuzicima ukuba zisebenze, iimagnethi zikhutshwa ngokulula sisixhobo sentsimbi (ukutsala iqhosha). Kwimeko yokungasebenzi, iimagnethi ezivaliweyo zinokususwa ngokulula kwifom yetafile. Iimagnethi zangaphambi kwesamente zinokusetyenziswa zodwa okanye zidityaniswe neadpator ukulungisa ifom. Ngokwesiqhelo i-1350Kg yemagnethi yamandla emileyo ifanelekile ngokugqibeleleyo kwimveliso yodonga lobunzima be-80-150mm. Kwakhona, siyakwazi ukuzikhusela ezinye iimagnethi zebhokisi yamandla, njenge2500KG, 3000KG yohlobo njengeemfuno zakho.
Ngenxa yamava ethu atyebileyo kwiiprojekthi zekhonkrithi zangaphambi kokulandelayo, thina, Meiko Magnetics, siyakwazi ukuyila kwaye sivelise zonke izisombululo ezibunjiweyo zombane weefektri zefreyithi, nokuba yeyiphi na iimagnethi zebhokisi, iimagnethi ezifakiweyo, iimagnethi zombhobho, ikhefu lemagnethi yangaphambili okanye enye imagnethi iinkqubo kwizicelo zangaphambili.
IZIBONELELO EZIBALULEKILEYO ZOKUVALWA KWEMAGnet:
1. Ukucutha ubunzima kunye nexesha lokufakwa kwefomwork (ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70).
2. Ukusetyenziswa jikelele kwimveliso yobuninzi beemveliso zekhonkrithi, kunye neemveliso zesahlulo kuzo zonke iintlobo kwitafile enye yentsimbi.
3. Ukuphelisa isidingo sentsimbi, iimagnethi zokuvala azonakalisi itafile yentsimbi.
4. Yenza ukuba kwenzeke ukuvelisa iimveliso zeradial. Ifom yokuVala uMazibuthe weSityalo sePrecast
5. Ixabiso elincinci leseti leemagnethi. Umndilili wokuhlawula malunga neenyanga ezi-3.
6. Eyona nto iphambili kwiimagnethi ezivaliweyo kukuba awudingi ukuba neendlela ezininzi ezahlukeneyo kwiimveliso ezahlukeneyo, kufuneka ube neseti yeemagnethi, iadaptha zeebhodi ezahlukeneyo zokuphakama kunye netafile yentsimbi. Ibhokisi yeMagnethi yokuValwa kweKhonkrithi eyi-900kg
Chwetheza L W H Ukujija Nyanzela NW
mm mm mm IKG IKG
I-SM-450 170 60 40 M12 450 1.8
I-SM-600 170 60 40 M12 600 2.3
I-SM-900 280 60 40 M12 900 3.0
I-SM-1350 320 90 60 M16 1350 6.5
I-SM-1800 320 120 60 M16 1800 7.2
I-SM-2100 320 120 60 M16 2100 7.5
I-SM-2500 320 120 60 M16 2500 7.8
Egqithileyo 900KG, 1Ton Box iimagnethi For Precast Tilting Itafile zomngundo Ukulungisa
Okulandelayo: I-1800KG yokuValwa kweMagnethi nge-On / Off Button yeNkqubo yeFom yoKwakha esekwe ngaphambili
1.5Ton Capacity Button Magnet
Ibhokisi yeMagnet eyi-1350Kg
I-1350KG Precast yeMagnethi eKhonkrithi
Iimagnethi zokuVala ze1350KG
1500KG Ibhokisi Magnet
Ibhokisi yeMagnetic ye-1500KG
Uhlobo lwe-1500KG yebhokisi yomazibuthe